Lahatsoratra nataon'i Ravi Chalaka ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Ravi Chalaka
Alarobia 19, 2020 Talata, Aogositra 18, 2020 Ravi Chalaka
Ny MQM no vola marketing vaovao. Ny fivorian'ny varotra mihaja (MQM) miaraka amin'ireo vinavina sy mpanjifa dia mitondra haingana kokoa ny tsingerin'ny varotra ary mampitombo kokoa ny fantsom-bola. Raha tsy manao nomerika ny kilaometatra farany amin'ny fampielezankevitra ara-barotra ianao izay mitarika fandresena bebe kokoa ho an'ny mpanjifa, tonga ny fotoana handinihana ny zava-baovao farany momba ny varotra. Miditra amin'ny tetezamita miovaova lalao isika avy amin'ny tontolon'ny MQL mankany amin'ny tontolo izay misy ny mpitarika vonona amin'ny resaka fifanakalozana vola. The
Talata, May 7, 2019 Alatsinainy, May 6, 2019 Ravi Chalaka
Ny ankamaroan'ny orinasa lehibe dia manao famatsiam-bola be amin'ny hetsika orinasa, fihaonambe ary foibe fampahalalana miaraka amin'ny fanantenana ny hanafaingana ny fitomboan'ny orinasa. Nandritra ny taona maro, ny indostrian'ny hetsika dia nanandrana modely sy fomba isan-karazany hanomezana lanja ireo fandaniana ireo. Ny làlan-kizorana be indrindra dia ny fahatsapana ny haino aman-jery sosialy ary ny fanadihadiana nataon'ny mpanatrika hahalala ny fiantraikan'ny hetsika amin'ny fahatsiarovan-tena amin'ny marika. Na izany aza, ny fivoriana dia ampahany lehibe amin'ny fanaovana orinasa. Mba hahombiazana dia tsy maintsy manao tetika stratejika ny orinasa